Tebụl iri nri mabụ ebu n'ogbe maka ụlọ na kichin
Agbakwunyere ngwaahịa a nke ọma na ụgbọ ibu!
Lelee ụgbọ ịzụ ahịa
Laghachi na ịzụ ahịa Gaba n'ihu maka ndenye ọpụpụ
Alibaba soplaya slate osisi akara akara ubi
Igwefoto foto slate eke okike sitere n'ike mmụọ nsọ
Mpempe akwụkwọ osisi slate dị ọnụ ala na Stainle...
obi udi nkume labels osisi mkpado osisi label garde...
Sample free N'ogbe ọcha marble Wood coaster Eco-...
Factory elu àgwà marble osisi foto etiti High ...
Igbe agba aja aja/igbe onyinye Nkwakọ ngwaahịa slate chalkb...
Slate efere slate ịcha osisi Factory new Sales W...
China factory N'ogbe omenala marble na osisi cheese ...
Ihe ịchọ mma ochie kacha ewu ewu okomoko DIY Modern Ha...
China Factory Cosen Direct N'ogbe 2 Tier Slate Ca ...
Ire efere efere tableware ejiri aka mee n'ùkwù slate efere
Ụlọ na ubi aka nka nri Fancy Marble Dessert...
Factory N'ogbe eke Black Slate cheese osisi ...
Ahaziri mara mma gburugburu ịchọ mma Jewe...
Natural Edge Hexagon Slate na-eje ozi Tray na Cooper ...
bọọdụ cheese ojii eke ojii maka ire ere
Top Choice Luxury Square Marble Wooden Coaster Maka D...
Ụdị nri nri abalị:
efere & efere
Gburugburu, ụdị omenala
Laghachi n'ụlọ akwụkwọ
Na-adigide, Ekekọbara, Eco-Enyi na Enyi
Efere chaja gburugburu
Ụlọ.ụlọ oriri na ọṅụṅụ.Bar.Hotel.Wedding
Nchekwa kọntaktị nri
Nkọwa: efere chiiz
Item nọmba: 10009
Akụkụ: Φ39.9×13cm ma ọ bụ omenala
Mechaa: Ihe siri ike/ebipụ ọnụ, elu eke
Nkwakọ ngwaahịa: shrinkwrap/ropewrap/igbe aja aja/igbe onyinye
Akara: laser / silkscreen / UV obibi
ọdụ ụgbọ mmiri: Ningbo/Shanghai/Jiujiang
Oge Mbuga ozi: Ụbọchị 30
Usoro ịkwụ ụgwọ:T/T ma ọ bụ L/C
Ajụjụ: Ị nwere ụlọ mmepụta ihe nke gị?
A: Ee, anyị bụ factory na ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ na slate Ngwuputa, nhazi, n'ichepụta na ahịa.
A: Ụlọ ọrụ anyị, na-ekpuchi 21044.28 square mita, dị na Xingzi, Jiujiang, Jiangxi Province ebe slate nwere ọkwa mbụ na China.
Ajụjụ: Ị nwere ebe a na-egwu mmiri nke gị?
A: Ee. Anyị nwere ikike ịnyapụta ihe and Ikikere Nchekwa Ọrụ n'ebe anọ e kenyere nkume nkume.
Ajụjụ: Ị nwere asambodo dabara adaba?
A: Ee. Anyị factory agafeela BSCI audited site TUV. Nchịkọta tebụl bụ nchekwa kọntaktị nri na 84/500/EEC na 2005/31/EC, LFGB .
Ajụjụ: Kedu ụdị ngwaahịa dị na ụlọ ọrụ gị? Kedu ihe ọpụrụiche ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị?
A: tumadi ebe anọ gụnyere iri nri, ibi ndụ, ịkọ ugbo na inye ihe. Anyị na-eche maka uru ndị ahịa ma na-anya isi maka mkpesa 0% n'ime afọ 10 gara aga.
Ajụjụ: Enwere m ike ịhụ sample gị mbụ?
A: N'ezie. Obi dị anyị ụtọ ịnye sample maka nleba anya gị n'efu, ịnakọta ibu.
Ajụjụ: Ọ bụ nkume nkịtị?
A: Ee, a na-eme iberibe niile site na slate eke, ejiri aka ike mechie ma ọ bụ ọnụ ọnụ. Slate anyị pụrụ iche na ọdịdị, udidi, agba, nke pụtara na ọ dịghị iberibe abụọ ga-abụ otu.
Ajụjụ: Slate ọ na-esighi ike? Ọ ga-agbaji ma m hapụ ya?
A: Isi ike yiri poselin ma ọ bụ iko. Bọdụ slate 5-6mm mgbe niile nwere ike ijikwa ibu ọtụtụ ugboro n'elu ya. Ọ bụ ya mere anyị ji gbutuo ya nke ukwuu, anyị agaghị agbaji ngwa ngwa.Ma o yikarịrị ka ọ ga-agbaji ma ọ bụrụ na ihe siri ike kụrụ ya nke ọma ma ọ bụ tụba ya n'elu elu siri ike. Ọ bụrụ na ị na-emeso ya dị ka efere kichin gị ma ọ bụ iko, ọ ga-adị mma nke ọma.
Ajụjụ: Kedu ka esi ehicha slate?
A: Na-ehichapụ ngwa ngwa site na ogbo dị mmiri mmiri ma ọ bụ ncha na-anọpụ iche iji kpochapụ. Plate Slate, ọ bụrụ na enweghị ụkwụ EVA na ala, ga-abụ nchekwa efere efere.
Ajụjụ: Kedu atụmatụ slate nwere?
A: Slate bụ nkume na-adịgide adịgide nke e kpụrụ n'ụwa ihe karịrị nde afọ 200 gara aga. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ala na mmiri, nke na-eme ka ọ dị mma maka ọnọdụ anyị n'èzí. Ọbụlagodi na akụrụngwa ya dị gịrịgịrị, ọ na-adịgide adịgide ma sie ike nke mere eji eji ya na tebụl, dị ka bọọdụ cheese, placemat, efere efere, nri round shape valentines day plate, cup coaster wdg.
Ajụjụ: Otu esi elekọta slate?
A: Iji chekwaa bọọdụ slate gị maka afọ ndị na-abịa, jiri obere mbelata ma ọ bụ abụọ nke mmanụ ịnweta ọkwa dị mma hichaa ya ihe dị ka ugboro abụọ n'afọ. Mmanụ ala na-enyere aka ichebe iguzosi ike n'ezi ihe nke slate ma na-edobe anya dị ntakịrị. Mara na oven na ngwa ndakwa nri adịghịdabara adaba.
Onye ahịa na-ebunye ihe
Nke gara aga: Sample free 2020 ọhụrụ wholesale marble Wood cheese bọọdụ mma marble cheese bọọdụ ọnwụ Servng osisi nri abalị efere homeware
Osote: Alibaba soplaya slate osisi akara akara ubi
Dinnerware Kitchen Obere Cheese Board nwere ...
Nri nri Ejiji Gburugburu Bamboo ọṅụṅụ Coaster
Ihe ịchọ mma gburugburu ịchọ mma ahaziri onwe ya...
Nkume Nkume Nkume Ekekọbara ụlọ na Acacia ...
Kacha ọhụrụ Ejiji Craft Square Natural Bamboo Tea ...
Wedding tableware Obere Natural Stone Black Slat...